Sarcoidosis UK မှာ 1-2 10000 နှုန်းကလူအပေါ်သက်ရောက်မှု; လူအနည်းငယ်ကသာအခြေအနေကို၏စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ။ SarcoidosisUK အများပြည်သူနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများပိုပြီးသတိထားမိသောအရာကို sarcoidosis နှင့်ကြောင့်ထိခိုက်လူမျိုး၏ဘဝတွေကိုအကျိုးသက်ရောက်ပုံကိုဖြစ်သင့်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ ဒီရည်မှန်းချက်ကျွန်တော်တို့ကိုအလှနျအရေးကွီးငါတို့သည်အဘယ်သို့ sarcoidosis ၏အသိအမြင်မြှင်အကြောင်းကိုသွားကြသည်ကိုအဘယ်ကြောင့်ဤစာမျက်နှာကိုရှင်းပြသည်။
အစောပိုင်း 2017 ငါတို့သည် SarcoidosisUK ကြှနျုပျတို့၏နာမညျကိုပြောင်းလဲသွားတယ်။ ရရှိလာတဲ့နာမကိုအမှီပြောင်းလဲမှုမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအကျယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ခံမှုလိုအပ်နေနှင့်အထွေထွေအတွင်း sarcoidosis ၏အများပြည်သူရဲ့အသိအမြင်အတွက်သူတို့အား SarcoidosisUK များ၏မြင်သာတိုးတက်လာခဲ့သည်။
အွန်လိုင်းရောက်ရှိနေ: တစ်ဦးကကြီးထွားလာခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအွန်လိုင်းရောက်ရှိနေ sarcoidosis အသိပညာပေးထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်နှင့်လှုပ်ရှားမှုများများအတွက်ပလက်ဖောင်းပေးပါသည်။ အသစ် SarcoidosisUK က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတိုးဆွဲဆောင်ခဲ့သည် 270% 2016 ခုနှစ်တွင်ဤသည်ကို Google မှာ AdWords (ထိုမေတ္တာမရှိကုန်ကျစရိတ်မှာတစ်ဦးကို Google Grant ကကိုသုံးပြီး) ကို အသုံးပြု. အနေနဲ့ကြော်ငြာကင်ပိန်းကို run အကူအညီရခဲ့အလားတူကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဇွန်လ-စက်တင်ဘာလ 2017 ခုနှစ်တွင်ထူးခြားသောဧည့်သည်။ ကင်ပိန်းဇွန်လ 2017 ခုနှစ်တွင်စတင်ကတည်းကကျနော်တို့ထက် ပို. ကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာများ၏လက်လှမ်းမမီနှစ်ဆပြီ ကျော်လွန် 160,000 ကလူ ဤအချိန်အတွက် Google ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာမြင်ကြပြီ!
လူမှုမီဒီယာရှေ့မှောက်တွင်: လူမှုမီဒီယာ, connect အသိပညာမျှဝေ sarcoidosis အကြောင်းကိုနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုပြန့်နှံ့ဖို့လူနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ SarcoidosisUK Facebook ကအဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်စိုက်ပျိုးထားပါတယ် 150% ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကတည်းက။ ကျနော်တို့ကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတွစ်တာစာမျက်နှာနှင့်အွန်လိုင်းဖိုရမ်တစ်ခုရှိသည်။
အခွားသောထိတွေ့ဆက်ဆံမှု: SarcoidosisUK အဖွဲ့ဝင်များ, ရံပုံငွေရှာနှင့်ထောက်ခံမှုအုပ်စုများတက်ရောက်တစ်ဦးတိုးပွားလာအပေါငျးတို့သပရိုဖိုင်းနဲ့ sarcoidosis ၏အများပြည်သူအသိပညာပြုစုပျိုးထောင်ရှိပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ 2017 အထိ: စံချိန်တင် 27 တစ်ဦးချင်းစီ SarcoidosisUK သုတေသနအတွက်ရန်ပုံငွေနှင့်ထက်ပိုခဲ့ကြ လူ 300 ဗြိတိန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ SarcoidosisUK ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့များတက်ရောက်ခဲ့သည်ပါပြီ။
, သင့်မိတ်ဆွေများကသင်၏ sarcoidosis နှင့်မည်သို့သင်သာသက်ရောက်သည်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမိသားစုနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကပြောဆိုပါ။ အဘို့အကြှနျုပျတို့၏ website မှသူတို့ကိုညွှန်ကြား ယေဘုယျသတင်းအချက်အလက်။ သူတို့ကအစနှင့်အတူဖုန်းခေါ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင် SarcoidosisUK သူနာပြုတိုင်ကြားမှု.
သင့်မိသားစုဆရာဝန်သို့မဟုတ်သင့် sarcoidosis အကြောင်းကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်နဲ့အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရန်ပြောဆိုပါ။ အဘို့အကြှနျုပျတို့၏ website မှသူတို့ကိုညွှန်ကြား sarcoidosis အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များ နှင့် အထူးကုမှရည်ညွှန်း.
တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်, သင့် sarcoidosis ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်အကြောင်းကိုသင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်ပြောဆိုပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူတို့ကို Give သို့မဟုတ်ပြသ အလုပ်ရှင်များလက်ကမ်းစာစောင်များများအတွက်သတင်းအချက်အလက်.
တစ်ဦးမှာ sarcoidosis များအတွက်လူနာသံအမတ်ကြီးဖြစ်လာ အမျိုးသားရေး သို့မဟုတ် ဥရောပအဆင့်.
အခြားသူများနှင့်သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေပါ - SarcoidosisUK တစ်ဦး '' လူနာပုံပြင် '' Submit ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်မှတ်ပုံတင်မယ် သတင်းလွှာ, Facebook စာမျက်နှာ နှင့်တစ်ဦးဖြစ်လာ အဖှဲ့ဝငျ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်အသိအမြင်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူယနေ့အထိတက်နေဖို့။
သင့်ကိုယ်ပိုင်အသိအမြင်ဖြစ်ရပ် Organize ။ ဤသည်ကိုလည်းရန်ပုံငွေပွဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထိတွေ့ Get အကူအညီနှင့်အကြံဉာဏ်။
သငျသညျ sarcoidosis ၏အသိအမြင်မြှင်အကြောင်းကိုအခြားအစိတ်ကူးများရှိပါကကြီးဖြစ်ပါတယ်! ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှစကားကိုနားထောငျဖို့ချစ်ကြလိမ့်မည် - ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
SarcoidosisUK ထက်ပိုမို 10 သတင်းအချက်အလက်များလက်ကမ်းစာစောင်များရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားလက်ကမ်းစာစောင်များ sarcoidosis အမျိုးမျိုးအပေါ်ဆေးပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်တွေအဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအလုပ်ရှင်များအဘို့အပင်ပန်းနွမ်းနယ်နှင့်သတင်းအချက်အလက်အဖြစ်အခြားအရေးကြီးသည့်အကြောင်းအရာများသည်။ 5000 ကျော်ဗြိတိန်နိုင်ငံတစ်လွှားဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ရွေးချယ်ထားသည့်ဆေးခန်းများနှင့်ဆေးရုံများတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်ပါပြီ။ အဆိုပါလက်ကမ်းစာစောင်များ, ဤဆေးဘက်စင်တာများအတွက် sarcoidosis ၏အများပြည်သူအသိအမြင်တိုးမြှင့်ဖို့စိတ်ကူးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်, GPS နှင့် non-sarcoidosis အထူးကု sarcoidosis ၏အခြေခံအပေါ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုပညာပေးနှင့်အကြောင်းကြားရန်လက်ကမ်းစာစောင်များကိုသုံးနိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကမ်းစာစောင်များအားလုံးပုံနှိပ်ကော်ပီအဖြစ်နှင့်မှရရှိနိုင်ပါသည် အွန်လိုင်းကိုဖတ်ရှု and download PDF များကြောင့်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိထုတ်လုပ်လျက်ရှိနယူးလက်ကမ်းစာစောင်များ Sarcoidosis နှင့်အသည်း / endocrine စနစ်နှင့် Sarcoidosis အာဟာရများပါဝင်သည်။
SarcoidosisUK ဗြိတိန်အတွက် # 1 sarcoidosis လူနာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများနှင့် sarcoidosis စောင့်ရှောက်မှု၏ပြည်နယ်တိုးတက်စေရန်အဆင့်ဆင့်၏နံပါတ်မှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ဖြင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံ။ ဤသည်စည်းရုံးရေးအလုပ်အခြေအနေကိုများ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုပေါ်ပေါက် - မူဝါဒနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများ sarcoidosis အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်ထောက်ပံ့မှုကိုတစ်ဦးသိပ်မြင့်မားတဲ့အဆင့်ကိုထိုက်တန်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလျစ်လျူရှုရန် ပို. ပို. နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာအား SarcoidosisUK လက်ရှိအရေးကြီးသော sarcoidosis မူဝါဒများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အသိပေးနှစ်ခုလူနာအကြံပေးအဖွဲ့အုပ်စုများပေါ်မှာထိုင်သည်။ ကျနော်တို့ဥရောပအသက်ရှုလမ်းကြောင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းကရေးသားထားကြောင်းသစ်ကို sarcoidosis ကုသမှုလမ်းညွှန်ချက်များ၏ဖန်တီးမှုအသိပေးတစ်ဥရောပအဆင့်မှာလူနာကိုယ်စားပြုနေကြသည်။ ကျနော်တို့ကိုလည်း NHS အပေါ်အချို့သော sarcoidosis လူနာမှရရှိနိုင်မယ့်ဆေးဝါးအဖြစ် Infliximab များအတွက်ကော်မရှင်မဟာဗျူဟာဆုံးဖြတ်ခြင်းမူဝါဒအလုပ်လုပ်အုပ်စုတစ်စုအပေါ်စိတ်ရှည်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ကြသည်။
SarcoidosisUK အင်္ဂလန်၏တောင်ဘက်အနောက်ဘက် sarcoidosis ၏စောင့်ရှောက်မှု၏ပြည်နယ်အပေါ်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာထုတ်လုပ်ရန် Healthwatch Plymouth နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အနောက်တောင်ပံ့ပိုးမှု Group နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည်။
SarcoidosisUK ဗြိတိန်အနှံ့ sarcoidosis စောင့်ရှောက်မှုပုံဖော်, 2018 အတှကျစီမံကိနျးကိုညှိနှိုင်းနေကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများ, လူနာစောင့်ရှောက်သူများ, ဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်အခြားပရဟိတလုပ်ငန်းနဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာပြုစုစောင့်ရှောက်မှု၏စံနှင့်ကိုက်ညီမှုတိုးတက်စေရန်လုပ်ရမည်ပြောင်းလဲမှုများကိုအသိပေးဖို့အသုံးပြုလိမ့်မည်။ ဒါဟာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနှင့် sarcoidosis များ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုမြှင့်ဖို့ရာထူးတိုးခံရလိမ့်မည်။
SarcoidosisUK ဗြိတိန်အနှံ့ sarcoidosis ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်။ ဤသည်လိုအပ်နေပြီလို့ဒီကဏ္ဍ sarcoidosis ၏အသိအမြင်တိုးပွါးလာ။ ကျနော်တို့အစဉ်မပြတ်ထိုကဲ့သို့သောကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနာအဖြစ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အကြှနျုပျတို့၏ website သတင်းအချက်အလက်မှဖြည့်စွက်ထားပါသည် သတင်းအချက်အလက်လက်ကမ်းစာစောင်များ, အတိုင်ပင်ခံ Directory ကို နှင့်မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများစာမျက်နှာ။ ဤရွေ့ကားပစ္စည်းများ SarcoidosisUK GPS, အထူးကုနှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အ sarcoidosis-related အချက်အလက်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်အဓိပ်ပာယျပါပွီ။
SarcoidosisUK တောင်ပိုင်းလန်ဒန်မြို့ရှိ Kings College ကဆေးရုံမှာ sarcoidosis Multi-စည်းကမ်းအသင်းနှင့်အတူအနီးကပ်အလုပ်လုပ်မိတ်ဖက်ရှိသည်။ ဒါကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိသောဆက်ဆံရေးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်အလက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများအကြောင်းကြားထောက်ခံမှုဝန်ဆောင်မှုများနှင့် sarcoidosis ၏အသိအမြင်တိုးတက်စေရန်မည်သို့အကောင်းဆုံးနားလည်ကူညီပေးသည်။
SarcoidosisUK ဝဘ်တလွှားကနေ sarcoidosis-related သတင်းပုံပြင်များထုတ်ဝေရန်နှင့်ဖြန့်ဝေ။ ကျွန်တော်တို့သည်ဒေသခံအမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာမီဒီယာများမှတစ်ဆင့်အများပြည်သူအကြားတစ်ဦးကိုတိုးမြှင့်အသိအမြင်မှခြေရာခံများနှင့်အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။